Malunga nathi - i-Dongguan kinda product Equipment Co., Ltd.
Elicoci iCartridge lokucoca ulwelo
PP elicociweyo iCartridge lokucoca ulwelo
IPES lokucoca ulwelo iCartridge
PTFE elicwangcisiweyo lokucoca ulwelo iCartridge
ICartridge yokuCoca iCartridge yePVDF
Glass Firber ndizayo lokucoca ulwelo iCartridge
Nylon ndizayo lokucoca ulwelo iCartridge
ICartridge yokuCoca iMetal
Stainless lokucoca ulwelo iCartridge
Umtya wokucoca ulwelo iCartridge
Uvavanyo lokuCoca ukuthembeka
Icebo lokucoca ulwelo ngesirinji
Dongguan kinda product Izixhobo Co., Ltd.
Yasekwa ngonyaka ka-2013, i-Donguan Kinda product Equipment Co., Ltd.yinkampani ye-hi-tech egxila kwi-R & D, kwimveliso, kunye nasekuthengiseni inwebu yokuhluza kunye neemveliso ezifanelekileyo. Ngokuhambelana nembono "yendawo yokuqala ephezulu, itekhnoloji ephezulu kunye nemigangatho ephezulu", sazisa ngokuzimisela, ukugaya kunye nokufunxa obona buchwephesha buhambele phambili kunye nokwahlula ubuchwephesha ekhaya nakumazwe aphesheya, baphuhlise izixhobo ezikhokelela kwisizwe, ubuchwephesha kunye nenkqubo ngeendlela ezizimeleyo amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nokuba lilungu loMbutho woShishino lweMembrane yaseChina.
Izinto zethu eziluhlaza zibonelelwa ngabanikezeli basekhaya nabaphesheya abaziwayo, abakhethiweyo kwaye bavavanywa kaninzi ngaphambi kokusetyenziswa. Iimveliso zeMembrane ezifakwe kwi-biomedicine kunye nokutya kunye nesiselo zonke zivunyiwe yi-FDA kwaye ziyahambelana neemfuno zovavanyo lokhuseleko lwe-USP yamva nje ngokunxulumene ne-VI-121C yokuphinda isebenze kwakhona kwezicubu zomntu kwiiplastiki. Inkqubo yemveliso ihambelana ngokungqongqo nemigangatho yolawulo lomgangatho we-ISO9001 kwaye iphunyezwa ngokusekwe kubahlalutyi abaphambili ukuze babone ulawulo lomgangatho lwangaphakathi olungqongqo kunolo lokuhanjiswa kwefektri.
Iimveliso zethu eziphambili ziquka amacebo okucoca ulwelo micro-pore, amacebo okucoca ulwelo, kunye lokucoca ulwelo kwaye zisetyenziswa bio-ekhemesti, ishishini imichiza, elektroniki, ukhuselo lokusingqongileyo, amandla, kunye novavanyo zenzululwazi zokuhlanjululwa, nzala, ukwahlukana, yoxinaniso, ukucokisa, Ukuphendulwa kwe-catalytic, kunye ne-biological reaction kwi-gas kunye ne-liquid. Xa kuthelekiswa neemveliso zeembrane eziqhelekileyo zokuhlanjululwa, ukwahlulwa, kunye neenkqubo zokuphendula, ezi mveliso zibonakaliswa ngokulula, ukusebenza ngokukuko, ukuthembeka, ixabiso eliphantsi, ubuhlobo bokusingqongileyo, ubuchule bokuyila, kunye nokusetyenziswa kakuhle kwamandla, kubonisa imiphetho yokhuphiswano.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, abantu baseKinda bahlala belumkile kwaye benesazela, bepragmatic, kwaye becacisa nolawulo lweKinda. Ngombulelo kukuzingisa kwethu, asizukuwina ilizwi ngomlomo phakathi kwabathengi bakudala kodwa sikwafumana ukuqonda okuqhubekayo kubathengi abatsha. Ishishini lethu lizinzile kwaye linenkqubela phambili, liyachuma mihla le. Okwangoku, sinamasebe asekwe kulo lonke elaseTshayina, kubandakanya iXiamen, iKunshan, iChengdu, neHong Kong, sinika abathengi iinkonzo kwihlabathi liphela. Ngokusekwe kwizimvo zethu zokulungiselela kunye namava eminyaka, kunye nomlinganiso wethu wokusebenza kwamaxabiso kunye nophuculo lwenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, siqinisekile ukuba liqabane lakho elihle!
Bldg D, Jinxiongda Tech Park, Xingyuan Road, Datanglang Village, Dalingshan Idolophu, Dongguan, Guangdong kwiphondo, China